ABASEBENZISI BAKAYETUBER BANABO BASUSWA KUDE EMVA KWEEVIDIYO EZIGWENXA - UKUXHATSHAZWA
I-YouTubers edumileyo yaBantwana yaBasusa emva kweeVidiyo eziGwenxa
UMike noHeather Martin okwexeshana baphulukene nelungelo lokugcina abantwana babo abahlanu ngenxa yeenkohliso abazidlalileyo kuthotho lweevidiyo ezikhutshiweyo ze-YouTube ezifumene esi sibini okuninzi yemali. Ukuphulukana nelungelo lokugcina umntwana kufanele kube ngokusisigxina.
Kwitshaneli yabo, uDaddyOFive, uMartins ubandakanyeke kwimigulukudu ebanyanzelisa ukuba abantwana babe kuyo — ukuba imisebenzi efana nokukhwaza abantwana abalilayo inokubizwa njengepranks. Ijelo laqokelela ababhalisile abangama-760,000 +, kwaye iinkxalabo kwakukudala zivakalisiwe malunga nokuba sempilweni kwabantwana. Kodwa bekungekho de ezinye iinkwenkwezi ze-YouTube zaqala ukubuza esidlangalaleni iiMartins ukuba amanyathelo okwenyani athathiweyo.
I-Engadget iyaqhekeka uthotho lweziganeko, ezimele ukuma njengesifundo esiqatha kwinto esiyenzayo kwi-Intanethi imicimbi I-IRL-ngakumbi xa into oyenzayo kwi-intanethi uthumela ubungqina bokuba ungumntu ohlukumeza isaphuli-mthetho.
Emva kokuba u-YouTuber odumileyo uPhilip DeFranco ejonge kwijelo likaMartins kwaye wazisa ngevidiyo yakhe, izinto zaqala ukungaziveli iiMartins. URose Hall, umama webhayoloji kubantwana ababini (uCody noEmma) baqala ukushiya izimvo kwiividiyo zikaMartins kwaye emva kokuba omnye u-YouTuber enze iphepha leGoFundMe ukunceda ngeendleko zomthetho, iHolo yanikwa ukugcinwa okungxamisekileyo okwexeshana kwesi sibini ngoLwesihlanu ophelileyo.
Zange khe ndibukele iividiyo zikaMartins kwixa elidlulileyo (abazisusileyo bazifaka endaweni yokuxolisa okugcwele iinyembezi), xa ndandiqala ukubona ibali, ndazibuza ukuba ingaba le yimeko apho i-Internet yehlokondiba labaphenduliyo, lilungile, lisabela kakhulu. Ndiye ndacela umhlobo wam uMarlene Bonnelly, u-YouTuber ozinzileyo, ukuba amthathe. Nantsi iakhawunti kaMarlene:
Ndizibukele iividiyo kuba ndingumntu obona ngamehlo. Umcimbi omkhulu kukuba bakhethe oyena mncinci, oyena nyana mncinci kunye novakalelo, uCody, OBUCHALE KAKHULU (ngawabo amagama) wayenemicimbi (yezentlalo / yokufunda / onayo) efuna ukujongisiswa.
Unina wamhlwaya ngokufaka inki kuyo yonke ikhaphethi yomntwana emva koko wamgxeka ngayo. Wayemkhwaza, egcwele isiqalekiso ade athuke de akhale phantsi kwaye elimele. Kwaye wahleka ebusweni.
Utata angabakhuthaza abantwana bakhe ukuba babethane, atyhale uCody ukuze ubuso bakhe bubetheke eshelufini (kwaye emva koko umbone enokubonakala ngathi yimpumlo yegazi), angazophula iithoyi zakhe (njengepilisi ayithandayo) emva koko Yiba ngathi hahaha ungakhathazeki sinokukuthengela entsha ngemali ye-YouTube!
Ikristale yenyanga yesikhephe ayilunganga
Aba bantwana, kodwa ngakumbi uCody, babekhanyiselwe igesi ngokugqithileyo. Kwakukho inqaku apho lo mntwana uhlwempuzekileyo wagcoba ilindle kuyo yonke indawo yokuhlambela ngokufanelekileyo, ethi iingcali ngengqondo yabantwana luphawu lwencwadi yokubonisa ukwenzakala ngokweemvakalelo.
Kwiveki elandelayo lonke usapho lwaya eDisney, kwaye ABAMZISANGA kuba besithi akakwazi kuziphatha.
Wonke umntu waya ngaphandle kwakhe.
Aba bazali bagcwele ikaka. Xa beqala ukungena emanzini ashushu, babiza wonke umntu ngokuchasene nabo babathiyileyo kwaye abantwana babo baya kwikhamera besithi sihamba kakuhle neepranks. Ubuncinci awusibethi njengabanye abazali.
Baye bahlanjwa ngengqondo. Ewe akukho mntwana uya kuhamba ngokuchasene nentando yabazali bakhe, ngakumbi ukuba ibandakanya owona mthombo wabo wokufumana umvuzo. Awufuni ukuba lilungu elinye losapho othetha phandle kwaye wonke umntu ajike ngokuchasene nawe ngakumbi.
hacker typer tricks ukufikelela kunikezelwe
Xa abazali beqonda ukuba abanakuphinda bahlukane nayo, bakhupha enye ingxelo besithi abantwana babekwi-pranks kwaye ubukhulu becala yayizezempendulo zobuxoki. Wonke umntu ubize i-bullshit, kubandakanya ne-anchor yeendaba ebenze udliwanondlebe nabo kwi studio. I-ankile ibibonakala ukuba inomsindo kakhulu.
Benza iividiyo apho umama wayekhala elila kwaye ecela intuthuzelo kubantwana bakhe kuba babehlaselwa kwi-Intanethi. Okona kweyona fakest ndikhe ndayibona. Wayephi xa abantwana bakhe babesentlungwini kwaye befuna ukuthuthuzelwa?
Okokugqibela, kutshanje, bazibeke zangasese zonke iividiyo zabo ngaphandle kokuxolisa, abathi baqesha inkampani ye-PR ukubanceda.
Akufuneki ukuba ndithethe, emva kokuva kukaMarlene, bendinomsindo kwaye ndicinga ukuba kanye, ihlokondiba le-Intanethi lenze into elungileyo. Ungayibukela Molo waseMelika elungileyo Icandelo elikhankanywe nguMarlene Apha . IiMartins zifuna inguquko engathandekiyo kwaye kubonakala ngathi ziyavuma ukuba abantwana bebengasoloko behlala kuyo. Intatheli yenza umsebenzi obalaseleyo wokubabiza kwi-bullshit yabo-kunye neebits zeDaddyOFive iividiyo esizibonayo ziphazamisa kakhulu.
Ilizwi lononkala e moana
Ividiyo kaDeFranco, ebonisa inki prank, yoyikeka ukubukela. Abantwana abajongi, konke konke, kuyo. Kwaye ukukhala, ukuqalekisa abazali ngekhe kube yinto ehlekisayo nokuba yonke loo nto ibifotwa kumdlalo bhanyabhanya onabadlali abaziingcali.
Ndacela uMarlene ukuba andincede ndiqikelele ukuba yimalini eyenziwe nguMartins kwisitishi sabo. Ngokusekwe kubalo-manani kunye nemivuzo evela kuYouTube, wayecinga ukuba ngamakhulu amawaka ababhalisile kunye nezigidi zokubetha, iiMartins zazisenza i-11,000 yeedola ngenyanga, ngumvuzo wokuba ngabantu aboyikekayo. Ndiyathemba ukuba baphulukana namadabi abo asemthethweni, kwaye ndinexhala labantwana abaselugcinweni lwabo.
Ukuza kukaMartins kufuneka kunike ikhefu kwabanye abantu abaxhaphazayo abanokucinga ukusebenzisa abantwana babo ukuba badume kwaye bafumane ubutyebi. I-YouTube akufuneki ihambisane nokuvumela olu hlobo lomxholo ukuba ludlule ngokuzonwabisa, kwaye iividiyo zababukeli bexesha elide, abafumene olu hlobo lokuziphatha luhlekisa iinyanga, kufuneka bathathe inyathelo elide babuyele kubomi babo nakwizinto abazikhethayo.
Eyona nto iyicaphukisayo le vidiyo, kokukhona yayithandwa, ii-anchor ze-GMA ziyayibona. Nangona kunjalo iividiyo zibonakalisa iMartins, zikwayisipili esilahlekisayo sonke.
(nge-Engadget, umfanekiso: screengrab)
Iimfazwe Eziphambili Ze-Rap
umgcini wamandla atyheli becky g
chris pine unganxibanga mfazi
robin wright uzibuze isimilo somfazi
Indoda yokugqibela emhlabeni iyanya